Global Voices teny Malagasy » Nandrara ilay mpilalao e-sport ao Hong Kong tsy hanao fifaninanana noho ny hiaka nataony momba ny teny filamatra manohana ny demokrasia ny orinasa Amerikana Blizzard mpamokatra lalao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Oktobra 2019 5:08 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Etazonia, Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Ireo mpilalao nizara ny sary famantarana “vaovaon” ‘ny Blizzard Entertainment hanehoana ny hatezerany tamin'ny fanapahan-kevitry ny orinasa Amerikana. Nalaina tao amin'ny Twitter.
Nosoratan'i Holmes Chan ary nivoaka  voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press (HKFP) tamin'ny 8 Oktobra 2019 ity lahatsoratra manaraka ity. Naverina navoaka ato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Naato nandritra ny 12 volana ny mpilalao e-sports matihanina monina any Hong Kong iray rehefa nihiaka hoe “Afaho i Hong Kong, ny revolisiona amin'ny fotoanantsika” nandritra ny fandaharana mivantana izy.
Naneho ny fanohanany ny fihetsiketsehana manerana ny tanàndehibe tamin'ny antsafa taorian'ny lalao ny Alahady i Ng Wai-chung, izay fantatra amin'ny anarana hoe “blitzchung” ihany koa. Nanao solomaso sy fitaovana fifohan-drivotra ihany koa izy, fanamiana fanaovan'ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny demokrasia izay mifanandrina amin'ny polisy misahana ny rotaka.
[VAOVAO FARANY] Niantso ny fanafahana ho an'ny fireneny tamin'ny antsafa nifanaovana taminy taorian'ny lalao ilay mpilalaon'ny Hearthstone ao Hong Kong, blitzchung.
Nilalao tamin'ny fifaninanana ambony tamin'ny lalao Hearthstone i Ng izay nokarakarain'ny orinasa Amerikana Blizzard. Be mpanaraka any Shina tanibe sy manerana an'i Azia ity lalao ity, ary manana ny dimy isanjaton'ny orinasa foiben'ny Blizzard, Activision Blizzard ny orinasan'ny teknolojia Shinoa Tencent.
Nilaza ny Blizzard tamin'ny fanambarana ny Alatsinainy fa nanitsakitsaka ny fitsipiky ny fifaninanana i Ng, indrindra fa ny fehezan-dalàna izay mandrara ny “fanaovana fihetsika izay, araka ny fitsipika manokan'ny Blizzard, mitondra amin'ny fanalam-baraka eo anatrehan'ny daholobe, manohintohina ny ampahany na ny vondron'olona ampahibemaso, na manimba ny endriky ny Blizzard. ”
Tsy nohazavaina izay fihetsik'i Ng nolazaina ho nandika ny fitsipiky ny orinasa.
Ho esorina amin'ny fifaninanana i Ng sady tsy nahazo loka lelavola ary tsy mahazo mifaninana amin'ny fidirana amin'ny fifaninanana e-sports Hearthstone izy mandra-pahatongan'ny 5 Oktobra 2020.
Nanapaka ny fifandraisany tamin'ireo mpanolotra fandaharana mivantana roa na “casters” izay nanatontosa ny antsafa niaraka tamin'i Chung ihany koa ny Blizzard na dia nanondrika ny lohany aza izy ireo mba tsy hidirany amin'ilay heviny. Niasa ho an'ny fikambanana Taiwaney ofisialy Hearthstone izy roa lahy ireo. Nilaza ny orinasa mpamokatra lalao:
Antitranterinay indray ny fitsipiky ny fifaninanana sy ny tokony ho fitondrantenan'ireo mpilalao ato amin'ny vondrom-piarahamonina e-sports Hearthstone avy amin'ny mpilalao sy ny manantalenta […] Na dia manaja ny zon'ny tsirairay haneho ny heviny sy ny eritreriny manokana aza izahay dia tsy maintsy manaraka ny fitsipika ofisialin'ny fifaninanana ny mpilalao sy ny mpandray anjara hafa izay misafidy ny handray anjara amin'ny fifaninanana e-sports.
“Blitzchung” Ng Wai-chung. Sary: Blizzard tao amin'ny HKFP.
Nilaza tamin'ny HKFP i Ng fa tsy hanao fitarainana momba ny fandraràna izy na dia hitany fa tsy rariny aza izany. “Efa fantatro fa hitranga izany ary manaja ny fanapahan-kevitry ny Blizzard aho,” hoy izy.
Talohan'izay, nanoratra tamin'ny fanambarana iray i Ng fa “endrika iray hafa amin'ny fandraisana anjara tamin'ny fihetsiketsehana fotsiny izay tiany hisarihana bebe kokoa ny sain'ny olona” ny fanapahan-keviny tamin'ny fiantsoana ny teny faneva. Nampiany hoe,
Mety hiteraka olana be amiko izany, eny fa na dia ny fiarovana ny aiko manokana eo amin'ny fiainana andavan'andro aza. Saingy heveriko fa adidiko ny milaza zavatra momba ny raharaha.
Nilaza tamin'ny seha-baovao momba ny lalao IGN  ihany koa izy fa tsy nanenenany ny fihetsiny: “Tsy [nanenina] tamin'izay nolazaiko aho … tsy tokony hatahotra an'izany karazana fampihorohoroana fotsy izany aho.”
Mpisera marobe no namoaka fanehoan-kevitra feno fahatezerana tao amin'ny sehatra Blizzard Reddit, nahitana tamin'ny olona sasany nilaza fa hanao ankivy ny lalao ataon'ny orinasa izy ireo. Hoy ny iray nanoratra:
Nandany dolara an'arivony tamin'ny lalao Blizz sy ny famandrihana nandritra ny 20 taona aho ary tsy hanao Blizzard intsony aho raha izany no toetoetrany.
Ny olona sasany kosa nilaza ny orinasa noho ny zavatra hitany fa fihatsarambelatsihy:
Ahoana no ahafahan'ity orinasa ity manohana ny zon'ny LGBT ary maneho ireo vondron'olona vitsy an'isa amin'ny lalao ataon'izy ireo kanefa mandritra izany dia manafoana ny antsafa niaraka tamin'ny mpilalao HearthStone satria manohana ny mpanao fihetsiketsehana ao Kong Kong izy?
Niparitaka tao amin'ny Reddit sy Twitter ny sary famantarana vaovao an'ny orinasa:
Tokony hampiasa an'ity sary famantarana ity ianareo manomboka izao ry Blizzard. Fampisehoana mahamenatra. Nilalao ny lalao Blizzard nanomboka hatramin'ny taona 1995 aho. Tsy hikasika ny lalao ataonareo intsony aho raha mbola tsy mivaha amin'ny fomba miabo izany.
Nifandray tamin'ny Blizzard ny HKFP mba haka fanazavana fanampiny.
Hatramin'ny volana Jona, nahitana fihetsiketsehana goavana tao Hong Kong nanohitra ny volavolan-dalàna ahafahana mandroaka-mampody olona any Shina, izay nanjary lasa fihetsiketsehana nahery setra avy amin'ny mpanohitra indraindray noho ny fitsabahan'i Beijing, ny demokrasia ary ny lazaina ho herisetra ataon'ny polisy.
Nampiasain'ilay mpikatroka mafàna fo nogadraina tao an-toerana antsoina hoe Edward Leung ny teny faneva hoe “Afaho i Hong Kong, ny revolisiona amin'ny fotoantsika”, ary nampiasaina ho toy ny teny filamatra fototra amin'ny hetsika manohana ny demaokrasia amin'izao fotoana izao.
Raha te-hahalala bebe kokoa momba ny fihetsiketsehana any Hong Kong, tsidiho ny pejy fitantarana manokana  ato amin'ny Global Voices.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/17/143841/
 pejy fitantarana manokana: https://globalvoices.org/specialcoverage/the-people-of-hong-kong-vs-the-china-extradition-bill